Ny fanaka tsara indrindra ho an'ny birao an-trano | Trivoshop
Hiditra / Sign up
Varotra an-tapitrisany | Ireo marika ambony | Tehirizo izao!
Office Automotive Solosaina sy elektronika Bike / Scooter an'ny herinaratra Home & Garden Networking & Telecom
Solosaina sy elektronika
Bike / Scooter an'ny herinaratra
tsy hita ny fandikana: en.general.icons.icon_search_close kisary
Lisitry ny sariitatra View ny hovidiana
Lisitry ny kaonty Hiditra
Lohahevan'ny manidy akaiky
Share on Facebook Tweet tao amin'ny Twitter Share on LinkedIn Pin ao amin'ny Pinterest
Jolay 1, 2019 Afra Sanjana
Ny fanaka an-trano tsara indrindra ho an'ny biraonao
Orinasa maro, ao anatin'izany ny orinasa lehibe toa an'i Microsoft, no mamela ny mpiasan'izy ireo miasa lavitra avy any an-tranony. Raha iray amin'izy ireo ianao dia mety fantatrao fa zava-dehibe ny fananana toerana voatokana hahafahanao mahazo aina amin'ny fanatanterahana ny asanao tsara indrindra isan'andro. Mba hahatratrarana ny famokarana ilaina sy ny fampiononana ao amin'ny biraon'ny tranonao dia tokony hanana fanaka mety ianao.
Rehefa misafidy ny fanaka ao amin'ny birao an-trano ianao dia tandremo ny fiasa misy azy sy ny fahafinaretany aorian'ny 8 ora ampiasana azy. Miankina amin'ny karazana asanao dia mila birao iray sy seza farafaharatsiny ianao. Seza fanampiny sasany ho an'ny vahiny no tsara raha misy ny mpanjifanao manapa-kevitra ny hitsidika anao.
Maka latabatra ho an'ny biraonao
Ny karazana asa hataonao, ary ny fitaovana ilainao dia hisy fiatraikany lehibe rehefa misafidy birao. Ireto misy faritra tokony hodinihinao rehefa mifantina ny latabatrao.
Ny tampon'ny latabatrao dia tokony ho lava sy lalina mba hahafahan'ny fitaovana ilaina rehetra. Angamba ianao hampiasa solosaina finday fotsiny, fa raha mila mpanara-maso birao roa na toerana anaovana antontan-taratasy ara-batana ny asanao dia tsy maintsy misafidy latabatra misy velarana lehibe kokoa ianao.
Handany fotoana betsaka amin'ity birao ity ianao, koa alao antoka fa ahazoana aina ny mipetraka. Tsy maintsy manana seza misy kalitao koa ianao, fa hiresaka momba izany isika amin'ny manaraka. Ny latabatra ergonomika tena tsara dia hitazona ny tonon-taolana hitanao amin'ny zoro ankavanana. Ny latabatra sasany dia miaraka amin'ny tongotra azo ovaina, mba hahafahanao mametraka ny haavony sy ny toerana tadiavinao.
Raha tsy mandeha tsy misy tariby tanteraka ny fitaovanao rehetra dia tsy maintsy mieritreritra ianao fa ho mora ny hametaka ny tadiny rehetra anananao. Monitor, jiro, mpanonta, charger finday, router sns. Mitadiava birao misy seranan-tsambo ary misy lavaka kely hisakanana azy ireo tsy hanaraka anao.
Ny latabatra Offex Crank latabatra mijoro miovaova izay manome anao ny fahaizana mahita fa mahay mandanjalanja ny fipetrahana sy ny fitsanganana mandritra ny andro lava fiasana.
Misafidy ny seza mety ho an'ny biraonao
Raha misafidy seza ianao, ny habe dia iray amin'ireo zavatra tena ilaina tokony hojerena.
Ny haavon'ny seza dia mety miovaova amin'ny 16-21 santimetatra mamela anao hanitsy azy araka ny haavony mety aminao. Ny sezanao dia tokony ho 17-20 santimetatra farafahakeliny farafahakeliny, ary ny habe mety indrindra ho an'ny backrest dia 12-19 santimetatra ny sakany.
Alohan'ny hisintonana ny seza ho an'ny biraon'ny tranonao dia alao antoka fa vita amin'ny lamba fofonaina izy io, izay heverina ho tsara indrindra.
Birao Ergonomika manana andraikitra ary seza filalaovana, 7-lalana azo ovaina
Jiro birao tonga lafatra
Miaraka amin'ny hazavan'ny andro voajanahary, ary ny jiro valopy tsy azo ovaina, ny jiro birao tsara dia hanome anao jiro multidirectional, izay mampihena ny fihenan'ny maso sy ny fahasosorana. Ny jiro birao samihafa azo ovaina dia mampihena ny fahasamihafana misy eo amin'ny zavatra ifantohanao sy ny manodidina. Amin'izany dia hanana fifantohana tsara kokoa amin'ny antsipiriany ianao raha tsy marary an-doha. Amin'ny fampiasana jiro mangatsiaka ho an'ny jironao, dia hahatsapa ianao fa mamokatra sy miasa kokoa.
Mifanohitra amin'ny jiro mangatsiaka, ny mavo dia afaka mampitony ny sainao ary manampy anao hiomana amin'ny torimaso aorian'ny fiasana amin'ny alina. Ny fifandraisana misy eo amin'ny mari-pana sy ny vokatra dia tsy voafaritra, fa ny olona sasany dia mety maniry jiro mafana mandritra ny ora fiasana lava, miankina amin'ny toetrany sy ny asany amin'ny asany.
Jiro birao mainty haingon-trano Dainolite
Ny famoronana birao an-trano mahomby dia manomboka amin'ny latabatra mety. Ny birao tonga lafatra dia tokony hifanaraka amin'ny toerana malalaka ao an-tranonao ary tokony hanana ny faritra amboniny ilainao hitazomana ny fitaovanao. Ankoatry ny birao, mandany fotoana amin'ny fikarohana ny seza mety sy jiro dia hahazo aina ianao amin'ny fampiasana mihoatra ny 40h isan-kerinandro.
Filed amin'ny: fanaka, birao
Kisary Chevron ambany Previous lahatsoratra Ahoana ny fividianana fatra manohitra tsara ny aminao
Next lahatsoratra 5 tena ilaina amin'ny hatsaran-tarehy fahavaratra ho an'ny tarehinao, ny vatanao ary ny volonao Kisary Chevron ambany
Mahita antsika amin'ny Facebook Mitadiava anay ao amin'ny Twitter Mahita anay ao amin'ny Pinterest
Rohy amin'ny footer Kisary Chevron ambany
Ataonay marani-tsaina sy lafo vidy amin'ny alàlan'ny fanolorana vokatra marobe tsy manam-paharoa amin'ny vidiny mora. Mikendry ny hihoatra ny fanantenan'ny mpanjifanay izahay ary manolotra vokatra kalitao amin'ny làlan'ny varavarana.
Lisitry ny tsipika Nampiana ny sarinao:
Lock matoanteny Zahao hoe
Kisary Chevron ambany
INONA NO mailakao?
Nampiana tamin'ny lisitra fanirianao ny vokatra.
Azonao atao ny mijery ny lisitry ny fanirianao amin'ny alàlan'ny famoronana na kaonty fidirana.
Azafady mamorona kaonty amin'ny alàlan'ny mailaka # # mpanjifa_email # #